Batch Controller ကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ ANGJI
1. အမှားသည် ၀.၂% ထက်နည်းသည်။ ၎င်းသည်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စစ်ထုတ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အာရုံခံကိရိယာနှင့် transmitter အမှားများကိုလျှော့ချရန်နှင့်စနစ်၏တိုင်းတာမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။
၂။ current, voltage နှင့် pulse output အတွက်သင့်လျော်သော Flow sensor;
start, recovery, နှင့်အသီးအသီးစုဆောင်းတန်ဖိုးရှင်းလင်းဘို့ 3.3switch ကို input ကို;
ကြီးမားသောအဆို့ရှင်အဘို့အ 4.Point ထိန်းချုပ်မှု output ကို, အသေးစားအဆို့ရှင် hierarchical ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ချက်ချင်းစီးဆင်းမှုကန့်သတ်နှိုးဆော်သံ,
5. အမျိုးမျိုးသော output သည်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်စံလက်ရှိလျှပ်စစ်ဗို့အားပုံစံဖြင့်ချက်ချင်းစီးဆင်းနိုင်သောတန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။
6. အပိုင်း 8 linear ပြင်ဆင်ချက်စီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာ၏ nonlinear အမှားလျှော့ချနိုင်ပါတယ်;
ကွန်ပြူတာနှင့်မီတာများအကြားအချက်အလက်အပြည့်အစုံနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရရှိရန်အတွက်ကြည်လင်ပြတ်သားသောမြန်နှုန်းမြင့်ထိရောက်သည့်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုအင်တာဖေ့စ။ ထူးခြားသောထိန်းချုပ်မှုလွှဲပြောင်းလုပ်ဆောင်မှုသည်ကွန်ပျူတာအားအလုပ်လုပ်သောအခြေအနေနှင့်တူရိယာ၏ output ကိုတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ တိုင်းတာခြင်းဒေတာကိုဖတ်ရှုဖို့အချိန် 10ms ထက်နည်း
၉။ စမ်းသပ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ ပြင်ဆင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အပလီကေးရှင်းနည်းပညာနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေး။
၁၀။ ဟာ့ဒ်ဝဲနာရီပုံနှိပ်ခြင်းမျက်နှာပြင်နှင့်ပုံနှိပ်ယူနစ်ပါ ၀ င ်၍ manual၊ အကယ်၍ အသိဉာဏ်ရှိသောပုံနှိပ်စက်ကိုရွေးပါကမီတာများစွာဖြင့်ပုံနှိပ်စက် ၁ ခုထက် ပို၍ ဝေမျှနိုင်သည်။
A.24VDC၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု W10W
B.85-220VAC, ပါဝါစားသုံးမှု W10W
စံ thermocouples - K, E, B, J, N, T, S
စံအပူခုခံ - Pt100, Pt1000
စတုဂံပုံသဏ္,ာန်, sine လှိုင်းနှင့်တြိဂံလှိုင်း, လွှဲခွင်ထက်ပို 4V, ကြိမ်နှုန်း0~ 10KHz (သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ) ။
analog output ကို
1.DC0~ 10mA (ဝန်ခုခံမှုΩ750Ω)
2.DC4~ 20mA (ဝန်ခုခံမှု≤500Ω)
ထိန်းချုပ်မှု output ကို
3 way relay output (ကြီးမားသောအဆို့ရှင်၊ အဆို့ရှင်သေးသေးလေး၊ pump)၊ AC220V / 3A; DC24V / 6A (ခံနိုင်ရည်ရှိသောဝန်)
tandard အမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှု interface ကို: RS-232C, RS-485, Ethernet
DC24V သည်ဝန်သည် 100mA ထက်နည်းသည်သို့မဟုတ်ညီသည်။ DC12V သည်ဝန်သည် 200mA ထက်နည်းသည်သို့မဟုတ်ညီသည်
Serial အပူပရင်တာတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းတူရိယာဒေတာ, အချိန်မှန်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းဒေတာ, ပုံနှိပ်ဒေတာကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
A. အ Blacklit မျက်နှာပြင် 128 x ကို 64 အစက် matrix ကိုအရည်ကြည်လင်ဂရပ်ဖစ် display ကို
ခ။ သမိုင်းဆိုင်ရာတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောစီးဆင်းမှု၊ ချက်ချင်းစီးဆင်းမှု၊ အလတ်စားအပူချိန်၊ အလတ်စားသိပ်သည်းဆ၊ စီးဆင်းမှု (differential current, frequency)၊ နာရီ၊ နှိုးစက်အခြေအနေ
C.0~ 999999 ချက်ချင်းစီးဆင်းမှုကိုတန်ဖိုး
00င် ~ 99999999.9999 တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတန်ဖိုးကို
အီး -9999 ~ 9999 အပူချိန်လျော်ကြေး
အက်ဖ် -99999 ~ 999999 စီးဆင်းမှု (ဖိအား, ကြိမ်နှုန်း) တန်ဖိုးကို
တိုင်းတာမှုတိကျမှု: + 0.2% FS + 1 စကားလုံးသို့မဟုတ် 0.5% FS + 1 စကားလုံး; ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းတိကျမှန်ကန်မှု - ၁ သွေးခုန်နှုန်း (LMS) သည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၀.၂% ထက်သာလွန်သည်။
A.Power နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်တန်ဖိုးကိုအချိန်စုဆောင်း
C. ပုံမှန်မဟုတ်သောအလိုအလျောက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း (စောင့်ကြည့်ခွေး)
D.Reetable fuse၊ တိုတောင်းသော circuit protection
အပူချိန်လျော်ကြေးနှင့်အတူကြီးမားသောအဆို့ရှင် / အဆို့ရှင် / စုပ်စက်ထိန်းချုပ်မှု interface ကို, start / stop / reset ခလုတ် interface ကို, 220VAC / 12 ~ 24VDC ပါဝါထောက်ပံ့ရေး
အပူပေးလျော်ခြင်း၊ သီးခြား RS485 ဆက်သွယ်မှု၊ ကြီးမားသောအဆို့ရှင် / အဆို့ရှင် / စုပ်စက်ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်နှင့်တကွ၊ စတင် / မှတ်တိုင် / ပြန်လည်စတင်ခြင်းခလုတ် interface၊ 220VAC / 12 ~ 24VDC power supply
အပူချိန်လျော်ကြေးနှင့်အတူ U disk ကို interface နှင့်အတူ, start / stop / reset ခလုတ် interface ကို, 220VAC / 12 ~ 24VDC ပါဝါထောက်ပံ့ရေး
အပူချိန်လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြင့်ကြိုးမဲ့ဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှုဖြင့်စတင် / ရပ်နား / ပြန်လည်သတ်မှတ်ခလုတ်မျက်နှာပြင်၊ 220VAC / 12 ~ 24VDC power supply
အပူပေးလျော်ခြင်းနှင့်အပူပရင်တာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် RS232 ဆက်သွယ်မှုဖြင့်စတင် / မှတ်တိုင် / ပြန်လည်စတင်ရန်ခလုတ်မျက်နှာပြင်၊ 220VAC / 12 ~ 24VDC ပါဝါထောက်ပံ့ရေး
အပူချိန်ကိုလျော်ညီစွာ၊ လက်ရှိထုတ်လုပ်မှု4~ 20mA အထိနှင့်စတင် / ရပ် /
အပူချိန်လျော်ကြေးနှင့်အတူသီးခြား RS485 ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ4~ 20mA လက်ရှိ output ကိုအားလုံးလမ်းနှင့်အတူ, start / stop / reset ခလုတ် interface ကို, 220VAC / 12 ~ 24VDC ပါဝါထောက်ပံ့ရေး
Valve သည်အသုတ် Controller